Home » Ny olona ao amin'ny Travel & fizahan-tany » Royal Palm Hotel Galapagos dia manendry Tale Jeneraly vaovao
Ny Royal Palm Hotel, Galapagos dia nanambara ny fanendrena Mpitantana Jeneraly vaovao iray izay hanatevin-daharana ny hotely amin'ity volana ity. Nifandray tamin'ny Royal Palm Hotel Galapagos ny eTN hamela anay hanaisotra ny rindrina fandoavam-bola ho an'ity fanambarana an-gazety ity. Tsy mbola nisy valiny. Noho izany, ataonay ho an'ny mpamaky anay ity lahatsoratra vaovao ity ary manampy rindrambaiko iray izahay
Ny Royal Palm Hotel, Galapagos dia nanambara ny fanendrena Mpitantana Jeneraly vaovao iray izay hanatevin-daharana ny hotely amin'ity volana ity.
Ekoatoriana teratany manana traikefa 20 taona tamin'ny varotra, varotra, marketing, fandraisam-bahiny ary fizahan-tany, Andriamatoa Diego Andrade Murtinho dia niditra tao amin'ny Royal Palm Hotel tamin'ny toerany talen'ny varotra nasionaly ho an'ny hotely Oro Verde, vondrona mpamatsy tolotra fampiantranoana misy efitrano 600 mahery any amin'ireo tanàna 4 any amin'ny tanibe Ekoatera.
"Andriamatoa Andrade dia hanara-maso ny hotely butikantsika highland sy Villa Escalesia irery ihany, izay tantanan'ny ekipan'ny Royal Palm; mitondra hevitra vaovao, angovo betsaka ary fanovana mavitrika ho an'ny ekipa ao amin'ny fanananay manokana. Ny traikefa ara-barotra nataony, ny fifandraisana amin'ny sehatry ny fizahan-tany fizahan-tany any Ekoatera sy ny paikady mazava momba ny asa, dia hiantoka ny tanjontsika amin'ny ho avy sy ny fitomboan'ny asa aman-draharaha ho an'ny Royal Palm ”hoy i Sir John Madejski, tompon'ny hotely.
TraNeXus Holding dia nanambara ny mpitarika indostrian'ny haitao fizahan-tany Christoph Klenner ho mpikambana ao amin'ny Birao sy talen'ny TraNeXus Global Services